A320 Mega family pack - varavarana A321 tsy manokatra?
fanontaniana A320 Mega family pack - varavarana A321 tsy manokatra?
1 taona 6 volana lasa izay #1092 by BlueSwurl
Ny fiaramanidina hafa dia tsara avokoa ao anatin'ilay kitapo afa-tsy ny A321, azoko atao ihany ny manokatra varavarana misokatra, moa ve misy famaha ho an'ity?
1 taona 6 volana lasa izay - 1 taona 6 volana lasa izay #1094 by DRCW
Miarahaba, mandika ny fizarana [EXITS] ao amin'ny A321 default ary manolo izany fizarana izany ao amin'ny fonosana A321 ao anaty fonosana Mega! Raha mila dingana dingana ianao dia ampahafantaro ahy. Mba hahamora kokoa azy, eto dia ity fizarana natao pirinty etsy ambany .. ataovy kopia ary velohy
exit.0 = 0.4, 45.50, -6.0, 7.0, 0 // openclose ny isan-jaton'ny isan-tsegondra, longitudinal, lateral, miorina amin'ny datum (tongotra), karazana (0 = Main 1 = Cargo 2 = Emergency)
exit.1 = 0.4, -33.50, 5.85, 0.0, 1 // openclose ny isan-jaton'ny isan-tsegondra, longitudinal, lateral, miorina amin'ny datum (tongotra), karazana (0 = Main 1 = Cargo 2 = Emergency)
exit.2 = 0.4, 29.90, 6.0, 1.0, 2 // openclose ny isan-jaton'ny isan-tsegondra, longitudinal, lateral, miorina amin'ny datum (tongotra), karazana (0 = Main 1 = Cargo 2 = Emergency)